“Trace the Face” - Muhaajiriinta Yurubka ku sugan - Acerca de nosotros
Maclumaadka asalkaCurrently selected
Trace the Face ayaa ah Laanqeyrta Cas iyo weybsaytka Bisha Cas kaaso ka caawisa soogalootiga iyo qoysaskooda sidii ay dib ula midoobi lahaayeen.
Markay u haajiraayaan Yurub, dad badan waxay lumiyaan xiriirkii ay la lahaayeen qoyskoodii dalkooda ku noolaa. Qaar kale waxay dhacaa inay gooni u sooceen eheladoodii ay la safrayeen. Soo celinta xiriirka marwalba ma fududo, dhamaantiin intaa ka badan marka reerkaaguba waliba guuran karo. Trace the Face waxaa loo sameeyay si sax ah si looga jawaabo caqabadan qaaska ku ah soogalootiga: ka caawi dadka helida ehelka la waayey ee joogi kara meel kasta oo ka mid ah wadada muhaajiriinta ee Yurub. Raadintaan waxay ku faafi kartaa seddex qaaradood - Yurub, Aasiya iyo Afrika.
Waxaa la aasaasay sanadkii 2013 markii ay sameeyeen Ururada Laanqayrta Cas ee wadanka Yurub iyo Guddiga Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC), Trace the Face waa weybsayt, halkaas oo dadka raadinaya qaraabadooda maqan ay ku daabacaan sawirkooda. Waxaan rajeyneynaa, inay aqoonsan doonaan ehelkooda ka maqan ama qof macluumaad ka hayo. Sawirrada carruurta kayar 15 jir lama shaacin, si looga ilaaliyo waxyeelada imaan karta. Waxaa lagu arki karaa kaliya iyagoo jooga laanqayrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC.
Hal qoys ayaa dib u wada xiriiro usbuuc kasta!
Waad mahadsantahay Trace the Face, qoysas fara badan ayaa soo isasoo helayaaya. Isku celcelis ahaan, hal qoys usbuucii, nambarada ayaa koraya. Si looga caawiyo dad badan xitaa inay soo celiyaan xiriirkii ay la lahaayeen kuwa ay jecelaayeen, fadlan faafi erayga.
Waybsayt ku qoran 7 luqadood
Trace the Face ayaa hadda lagu heli karaa toddobo luqadood: Carabi, Dari, Ingiriis, Faransiis, Pashto, Soomaali iyo Isbaanish. Luqado badan ayaa imaan doona.
Trace the Face sidoo kale waa qoraal dhajiyo
Khasab ma ahan in lagu daabaco mid sawir khadka tooska ah(onlayn) si loo isticmaalo Trace the Face. Dadku waxay kaloo dooran karaan in sawirradooda lagu soo bandhigo oo keliya barta dhajiska Trace the Face. Astaamaha dhajiskan waxaa ku jira 16 sawir oo ah dadka raadinaya qaraabadooda. Bil kasta, dhajiska cusub ayaa lagu daabacaa sawirro kala duwan. Waxaa loo diraa waddammada ka soo qayb-gala ee khusaya Trace the Face iyo hay'adda Laanqeyrta Cas ee dalka iyo Ururka Bisha Cas iyo xafiisyada ICRC. Dhajiska ayaa lagu soo bandhigayaa meelaha ay u badan tahay in lagu arko muhaajiriinta.
Wadamadee ayaa ka qeybgalaya barnaamijka?
Trace the Face waa waybsayt qof kastaa eegi karo, meel kasta oo adduunka uu ka joogo. Laakiin Suuragal maahan in la wada daabaco hal sawir dhammaan waddammada. Khariidadda hoose ayaa leh astaamaha waddamada Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo Bisha Cas ay ku bixiyaan adeeggan. Nasiib wanaag, dalal aad u tiro badan ayaa ku soo biiraya barnaamijka.
Liiska wadamada kaqeyb galaya
Haddii qof uu joogo waddan aan Trace the Face ka jirin, ama uu raadinayo qof qaraabo ah oo la waayey xaalad kale – tusaale ahaan dagaal – tusaale ahaan Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo Bisha Cas ayaa waliba caawin kara.
La soo xiriir Laanqayrta Cas ama Bisha Cas
Fur bogga xogta xiriirka
Barta Internet-ka ee La-Xiriirka Qoyska
Bartaan waxaa leh familylinks.icrc.org. Waxaa lagu talagalay dadka la waayey xilliyada dagaallada, aafooyinka dabiiciga ah ama hijrada.